ड्याम्म ड्याम्म खुट्टा बजार्दा पोथीहरु त मसक्क मसक्क
जुलाइ १६, २०१६
राम्रा लूगा । लरक्क परेको कपाल । हेर्दा खाइलाग्दो शरिर । सम्पत्ती । मिठो बोली । गम्भिर बानी । मानिसका छनौट मध्ये पर्ने गुण हुन् । तर म्रिगको एउटा जाति यस्तो हुन्छ कि पोथीलाई आफूतिर मसक्क मसक्क...
जुलाइ १२, २०१६
● ददि सापकोटा कुखुराका भाले । मत्ता हात्ती । वैंश लागेको साँढे । बोका, घोडा कामुक (सेक्सी) हुन्छन् भन्ने त जानेकै हो । देखिन्छ पनि । तर रुखविरुवा, वनस्पती पनि कामुक ? वनस्पती जगतमा धेरै हुन्छन् सेक्सी...
नाकाबन्दिका बेला वनभित्र रामराज्य
मे १२, २०१६
भारतले नेपालमा आर्थिक नाकबन्दि लागायो । सारा नेपाली अप्ठेरोमा परे । साँझ बिहाउन पकाउने उपाय भएन, इन्धन नभएर । तर यहि मेसोमा धेरैले मौका छोपे । त्यसको नाजायज फाइदा लिए, आफ्नै देशमा । सारा देशको ध्यान एकातिर...
बाघलाई भ्रममा राख्न टाउकामा मुकुण्डो
अप्रिल १८, २०१६
बाघ तिन देखि तिन मिटर चालिस सेमी लामो हुन्छ । उभिएको मान्छे सालाखाला एक मिटर ७० सेमी हुन्छ । चौडाई एक मिटर भन्दा होचो । होचो बाघले डेढ मिटर भन्दा लामो मानिस देख्दा चौडाईकै आधारमा (आफूलाई तुलना...
शत्रुलाई खबरदारी गर्न बाघका कानमा ‘छद्म आँखा’
कसलाई थाह छैन र ? कानको काम सुन्ने हो । अधिकांश जिवका दुई वटा कान र दुई वटै आँखा हुन्छन् भन्ने । सबैजसो जिवका कानको मुख्य काम सुन्नुनै हो । तर केहि अपवाद पक्कै हुन्छन् । बाघका...
जिवजन्तु हेर्न गएका राजकुमार नेपालको जंगलमा बने ‘बाघ’
मार्च २६, २०१६
नेपाली बन्यजन्तुविद, संरक्षणकर्मी र जंगलमा जिवजन्तुका पाईला खोज्दै हिँड्ने सामान्य नेपालीलाईपनि जानकारि भएको क्यामरा बेलायती राजकुमारलाई खासै जानकारि रहेनछ । बेलायती राजकुमार ह्यारी बन्यजन्तु, वातावरण र प्रक्रितिप्रेमी, संरक्षणवादीपनि हुन् । तर राति जंगलमा बाघको फोटो खिच्ने क्यामराबारे...
घाँटीमा पेटी बाँधेर नयाँ घरमा गैंडा
मार्च १४, २०१६
चितवनको गैंडा लामो यात्रा गरेर नयाँ घरमा सरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यो गैंडा पश्चिमको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सरेको हो । गैंडालाई हात्तीमा गएर लठ्याउने सुई हालेपछि बेहोस बनाएर ट्रकमा हालियो । ट्रकमा बन्द कोठा जस्तो...
‘सेल्फी’ खिच्ने हात्ती
मार्च ६, २०१६
मान्छेहरुले सेल्फि अर्थात लठ्ठि जस्तो मेशिनमा क्यामरा अड्याएर आफ्नो फोटो आफैंले खिचेको देखेपछि हात्तीपनि लोभिएको छ । थाइल्याण्डको एक पार्कमा मानिसहरुले सेल्फि खिचेको देखेर यो हात्तीलेपनि सेल्फी खिचेको हो । मानिसहरुले सेल्फी खिचेको देखेपछि क्यामरातिर धेरै आँखा...
वनको ढोका आफैं बन्द गर्ने हात्ती
फ्रेब्रवरी २१, २०१६
नवलपरासी जिलाको अ मलटारी पुगेका बेला विहानै हात्ती चढेर जंगल हेर्न मन् लाग्यो । अमलटारी ‘होम स्टे’ समितिले हात्तीको ब्यवस्था गरिदियो । माहुते (हात्ती चालक) ले करिव दुई घण्टा जंगल घुमायो । बाघ भालू देख्न मुस्किलै पर्ने...
सयौं निराशाका बिच नेपालीहरुले गर्व गर्न लायकको एउटा खबर
फ्रेब्रवरी १८, २०१६
यो वर्ष हामी नेपालीका लागि निराशा, दुख, छटपटी र बेदनाकै रह्यो । हाम्रा खबरहरु विश्वभरि नकारात्मक, निरासात्मक रहे । भूकम्पले हजारौंको आँसु बगायो । खरबौंको नोक्सानी पार्‍यो । हजारौंको ज्यान लियो । त्यसबाट उठ्न नसक्दै हामीले भारतीय...